Nepal Deep | प्रहरी प्रशासनको लाचारी: ज्वाला संग्रौलाले सरुवा गरिदिने धम्की दिएका असईको सरुवा !
प्रहरी प्रशासनको लाचारी: ज्वाला संग्रौलाले सरुवा गरिदिने धम्की दिएका असईको सरुवा !
काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको आफूलाई सामाजिक अभियान्ता भन्ने ज्वाला संग्रौलाले प्रहरी कार्यालय भित्रै ट्राफिक प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई)लाई थर्काइरहेको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ।
संग्रौला र उनको टोलीले प्रहरी कार्यालयभित्रै पुगेर जसरी पनि सरुवा गर्ने धम्की दिएका ट्राफिक प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई)को साँचै सरुवा भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा कार्यरत असई मणिकान्त झालाई महाराजगञ्जबाट महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा (बग्गीखाना) तानिएको हो। उनलाई नियमित सरुवा गरिएको भनिए पनि त्यो नभएको स्रोतले बतायो।
संग्रौलासहितको टोलीले गत जेठ ११ गते ड्युटीमा खटिएका झासँग महाराजगञ्ज क्षेत्रमा वादविवाद गरेको थियो। निषेधाज्ञाको बेला सवारी पासबेगर सवारी साधन लिएर हिँडेका उनीहरुलाई झासहितको ट्राफिक प्रहरीको टोलीले रोकेको थियो। पास र चालक अनुमतिपत्र दुवै उनीहरुसँग नरहेको भेटिएपछि झाले उनीहरुको सवारी होल्ड गरेका थिए। त्यसपछि विवाद भएपछि उनीहरुले असई झाले आफूहरुमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका थिए।
भिडियोमा देखिएअनुसार त्यसअघि संग्रौलासहितको टोलीले ‘ज्वाला संग्रौला भन्ने को हो? नाम सुनेको छ? मिडिया हेर्ने गरेको छ? प्रहरीको फुली लगाए भनेर ठूला कुरा गर्ने होइन नि फेरि। तपाईंको आईजीपीले सम्मान गरेर हिँडेको मान्छे हो ज्वाला संग्रौला। म ठेगान लगाइदिन्छु, एनीहाउ सरुवा हुनुपर्छ, गराइदिन्छु’ भनेर प्रहरी कार्यालयभित्रै असई झालाई धम्क्याएका थिए।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई काज सरुवा गरिएको छ। सरुवा भएर आएको ६ महिना नबित्दै उनलाई सरुवा गरिएको बताइएको छ। नियमित सरुवा हुन कम्तीमा १ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। असई झालाई ६ महिना नपुग्दै सरुवा गर्नुको कारण भने प्रहरी अधिकारीहरुले खुलाउन चाहेका छैनन्।
कोही सामाजिक अभियान्ता भन्दैमा ट्राफिक नियम नलाग्ने भन्ने हुँदैन। आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग गरिरहेका झालाई कसैको धम्कीको नै भरमा सरुवा गर्दा प्रहरी संगठनमा नकारात्मक असर पर्ने हेक्का प्रहरी प्रशासनले नराखेको देखिन्छ।
संग्रौलाले जसरी हुन्छ सरुवा गराएरै छाड्छु भनेर धम्की दिएको केही दिनमै असई झाको सरुवा हुनुले प्रहरीको मनोबल कमजोर हुने प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्यस्तै, भिडियोमा उनीहरुले झामाथि तथानाम भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। भिडियोमा देखिएअनुसार प्रहरी कार्यालयमा संग्रौलाको टोलीले असईको नाम सोधेपछि उनले आफ्नो नाम मणिकान्त झा भएको बताएका थिए। त्यसपछि संग्रौलासहितको टोलीले ‘झा… मधेशी… अब मधेशतिरै गएर खेतीकिसानी गर्नु….ट्राफिकको जागिर खाएर काम छैन…’जस्ता रंगभेदी शब्दसहित दुर्व्यवहार गरेका थिए।